Convert Zimbabwe dollar to yuan
UN exchange rates data at 23/10/2021 03:11
Zimbabwe dollar to yuan convertion. Zimbabwe dollar price in Yuan today on currency exchange market.
100 Zimbabwe dollar = 1.99 Yuan
Information on the conversion of the Zimbabwe dollar to yuan is updated once a day. Shows the average value of the conversion of Zimbabwe dollar into yuan. Banks are engaged in the transfer of Zimbabwe dollar into yuan. 1 Zimbabwe dollar rose by 0 yuan. Zimbabwe dollar exchange rate went up to yuan. For 1 Zimbabwe dollar now you need to pay 0.019927 yuan.
Exchange rate Zimbabwe dollar to Yuan
Six months ago, Zimbabwe dollar can be exchanged for 0.02011 yuan. Three years ago, Zimbabwe dollar can be exchanged for 0.021599 yuan. Ten years ago, Zimbabwe dollar could be bought for 0 yuan. Zimbabwe dollar exchange rate to yuan is convenient to see on the chart. The change of the exchange rate of Zimbabwe dollar to yuan for a month is -0.91%. -5.66% per year - the change in the exchange rate of Zimbabwe dollar.
Exchange rate Zimbabwe dollar (ZWL) to Yuan (CNY) live on Forex exchange market
Currency converter Zimbabwe dollar Yuan
Zimbabwe dollar (ZWL) to Yuan (CNY)
100 Zimbabwe dollar 1.99 yuan
500 Zimbabwe dollar 9.96 yuan
1 000 Zimbabwe dollar 19.93 yuan
2 500 Zimbabwe dollar 49.82 yuan
5 000 Zimbabwe dollar 99.64 yuan
10 000 Zimbabwe dollar 199.27 yuan
25 000 Zimbabwe dollar 498.18 yuan
50 000 Zimbabwe dollar 996.35 yuan
Today, you can convert 10 Zimbabwe dollar for 0.20 yuan. Today, 25 Zimbabwe dollar can be bought for 0.50 yuan. If you have 50 Zimbabwe dollar, then in PRC they can be sold for 1 yuan. Today, 1.99 yuan can be sold for 100 Zimbabwe dollar. If you have 4.98 yuan, then in PRC you can buy 250 Zimbabwe dollar. Today 500 ZWL = 9.96 CNY.
Zimbabwe dollar to Yuan exchange rate
Zimbabwe dollar to Yuan today at 23 October 2021
Zimbabwe dollar to yuan is now equal to 0.019951 yuan on 19 October 2021. 18 October 2021, 1 Zimbabwe dollar costs 0.019917 yuan. Zimbabwe dollar to yuan on 17 October 2021 - 0.019896 yuan. Zimbabwe dollar to yuan on 16 October 2021 is equal to 0.019896 yuan. The minimum Zimbabwe dollar to yuan rate in was on 15.10.2021.
Zimbabwe dollar to Yuan exchange rate history
Zimbabwe dollar and Yuan currency symbols and countries
Zimbabwe dollar State: Zimbabwe. currency code ZWL. Zimbabwe dollar Coin: cent.